Sina fanao voajanahary voajanahary vita vita vita amin'ny hazo voaisy hazo vita pirinty sy mpanamboatra | Huiyang
Capsule boaty kafe, boaty dite
Vata boaty hazo
boaty nify hazo
boaty vita amin'ny savony vita amin'ny hazo
Vata fanjairana hazo
Mpihazona lakile hazo
Boaty fitehirizana menaka ilaina amin'ny hazo
boaty divay hazo
Boaty mozika hazo
Tranon-rindrina hazo, fampirantiana
Vata firavaka hazo
Mpanamboatra Desktop Wooden
Vata aloky ny hazo
Trano vorona hazo / mpamahana vorona
Sarin'ny sary hazo
Fitaovana ao an-dakozia
Calender Advant Calender
Haingo Krismasy hazo
A4 mpihazona rakitra
fametahana kitay hazo
Birao momba ny Clip hazo
Holder hazo ho an'ny clip, pen, memo, carte
Mpihinana Menu hazo
Kitapo pensilihazo hazo
Dispenser Tape Wooden
Fanaka vita amin'ny hazo
boaty hazo mora vidy-amidy
Fanomezana boaty vita amin'ny kitay hazo ambongadiny
Newest varotra ambony kalitaon'ny divay vita amin'ny divay hazo ...
Kitapo fitehirizana tavoahangy 25 tsy vita vita vita amin'ny mora vita ...
Hazo bitro Bunny endrika tsy vita vita MDF Hetezo hazo ...
Orinasa vita vita boaty aloky ny hazo vita vita
mpanamboatra sinoa vita vita kesika vita amin'ny hazo kesika l ...
China factory ambongadiny boaty firavaka tsy vita
Kilalao zaza an-trano ankizy Minihouse Dollhouse Di ...
Fiara kilalao hazo kilalaon-jaza vita tanana vita amin'ny tanana
fanao voajanahary voajanahary vita vita vita amin'ny hazo sodina tsy vita ...
boaty fanamarihana hazo manokana misy ambongadiny firakotra fitaratra
Fitaovana DIY ambongadiny vita vita amin'ny boribory vita amin'ny hazo Flowe ...
Famolavolana birao namboarina manokana natokana ho an'ny birao vaovao ...
fanao voninkazo fanao voninkazo voninkazo MDF
ambongadiny endrika voninkazo voninkazo gazety press ambongadiny
ambongadiny voajanahary tsy vita vita telefaona tompona telefaona finday ambongadiny
Fanomezana ho an'ny orinasa
Logo an'ny mpanjifa
USD5000.00 isaky ny entana mifangaro entana ekena
50000 Piece / Pieces isam-bolana fanao voajanahary voajanahary tsy vita vita vita amin'ny hazo finday finday ambongadiny
fanao voajanahary voajanahary vita vita vita amin'ny hazo sodlid mpividy Wholesale50X26X32cm / 90pcs
17 taona FSC mpanamboatra voamarina, 15 taona Alibaba mpamatsy volamena
Paulownia wd, Pine wd, poplar wd, hazo Beech, Plywood, MDF
Rafitra fanaraha-maso Triple
2. Fanaraha-maso ny fizotrany rehetra
3.Checking pc amin'ny pc
Voalamina, voasokitra, sokitra tamin'ny laser, nandoko, niloko loko, nirehitra afo
Manodidina ny 3-5 andro
35-45 andro eo ho eo
USD1000.00 isaky ny entana ary USD5000.00 isaky ny entana.
Fonosana mahazatra: taratasy fotsy, taratasy vita amin'ny foam EPE, kitapo bubble, fonosana blister, boaty fandefasana mailaka, boaty anatiny, boaty fanaovana loko, 5 baoritra baoritra mitafo. Noraisina tsara ny fonosana namboarina.
T / T, L / C, Paypal, Western Union, fiantohana ara-barotra Alibaba.
F: Orinasa mpamokatra na varotra ve ianao?
A: Izahay dia mpanamboatra mari-pahaizana FSC fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra, 14 taona Alibaba mpamatsy volamena. Miorina amin'ny karazana boaty hazo sy asa tanana vita amin'ny hazo.
F: Ahoana no ahalalako ny kalitaonao
A: Ny sary avo lenta sy ny santionany dia ho afaka hanamarina ny kalitaonay.
F: Afaka mahazo santionany aloha ve aho? Ary ahoana no fomba andoavana ny ohatra?
A: Vitsy ny santionany tsotra maimaimpoana ary navoakan'ny fanangonana entana na mialoha. Ny santionany voampanga dia azo averina rehefa tonga ny filaminana.
F: Azonao atao ve ny manamboatra ny volavolan'ny mpanjifa?
A: Ny endriny namboarina sy ny habeny no raisina. Manaiky OEM izahay.
F: Ahoana no fomba andoavako vola?
A: Manaiky paypal izahay, union tandrefana, famindrana banky mivantana amin'ny kaontin'ny orinasanay sy ny LC maso. Raha tsy misy daholo etsy ambony, dia hanome anao invoice paypal ianao ary mandoa amin'ny carte de crédit anao fotsiny ianao.
F: Inona no tombony azo amin'ireo mpanafatra na mpaninjara maharitra?
A: Ho an'ireo mpanjifa mahazatra dia manome fihenam-bidy tsy mampino izahay, fandefasana maimaimpoana santionany, santionany maimaim-poana ho an'ny famolavolana fanao, fonosana manokana ary QC araka ny fepetra takiana manokana.
F: Afaka mahazo fanompoana isan-trano ve aho?
A: Eny, afaka manolotra fanompoana isan-trano isika.
Teo aloha: rindrina manokana napetraka ambongadiny vita amin'ny kalandrie hazo voajanahary
Manaraka: ambongadiny tsy nahavita nandondona trano saribakoly hazo ambongadiny
No.6 BaoTuQuan North Road, Jinan, Sina